को को हुन बौद्धिक चोरी गर्ने डाक्टर ? onlinedarpan.com
Sunday 17th of October 2021 / 06:12:37 AM
काठमाडौं, २९ असोज। नेपालका पाँच चिकित्सकलाई इन्डोनेसियास्थित बाली मेडिकल जर्नलले कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा भारतीय चिकित्सक पनि छन् ।जर्नलले बौद्धिक चोरीको आरोपमा उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्ने नेपाली चिकित्सकमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मुकेशकुमार श्रीवास्तव, सी.थानापरी, आरके गोइत, एनके यादव र आरके मित्तल छन् । त्यस्तै भारतीय चिकित्सकमा भी. रोहिल छन् ।
उनीहरुले काठमाडौंस्थित ओम अस्पतालका डा. भोला रिजाल, डा. भरत झा, डा. आर श्रेष्ठको शोधपत्रको हुबहु नक्कल गरी बाली मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गराएका थिए । यो खबर प्रकाशमा आएसँगै उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।